कम्प्युटर स्लो भयो ? अपनाउनुस यि उपाय
पाँचथर– तपाईको कम्प्युटर स्लो भयो अपनाउनुस यि उपायहरु अपनाउनु भयो भने तपाईको कम्प्युटर फास्ट गर्न मद्दत गर्दछ। आजभोली कम्युटर मानिसहरुका लागी अति आवश्यक सामान बन्दै गईरहेको छ। धेरै काम, छिटो र थोरै समयमा कम्युटरको सहयोग लिई गर्न सकिन्छ। तर तपाईको कम्प्युटर ढिलो चल्ने समस्याका कारण तपाईले समयमा काम सक्न गाह्रो हुन्छ, कुनै पनि फाईल खोल्दा निकै बेर सम्म कुर्नु पर्ने कम्प्युटर खोल्न समय लाग्ने लगायत समस्याका विषयमा आज हामी कुरा गर्दै छौ । ढिलो चल्ने कम्पुटरलाई कसरी फास्ट (छिटो) बनाएर चलाउन सकिन्छ त पहिलो कुरा तपाईको कम्प्युटरमा ¥याम कति जिबि ईन्सटल छ कम्प्युटरको प्रोग्राम चलाउन विषेश महत्व राख्ने एउटा सामाग्री हो ¥याम, त्यस्तै कम्प्युटरलाई स्लो गर्ने अर्को समस्या भनेको तपाईको अपरेटिङ सिस्टम क्रप्ट भएर पनि हुन सक्छ । त्यस्तै तपाईको हार्ड डिक्स पुरानो भएर या हार्ड डिक्समा समस्या भएर पनि कम्प्युटर स्लो हुन्छ।
कति जिवि र्याम राख्दा उपयुक्त हुन्छ ?
यो चाहि कस्तो हुन्छ भने तपाईले चलाउनु पर्ने प्रोग्राम कुन हो पहिला त्यो कुरामा भर पर्दछ। जस्तोकी तपाईले ह्याबि ग्राफिक डिजाईन सम्बन्धी प्रयोग गर्नु हुन्छ तपाईलाई बढि ¥यामको आवश्यकता पर्दछ सामान्य किसिमका प्रोगाम हरुमात्र चलाउनु पर्ने छ भने पनि तपाईले घटिमा पनि ४ जिबि सम्मको ¥याम चाई तपाईले कम्प्युटरमा राख्नु उचित हुन्छ।
कसरी हुन्छ त अप्रेटिङ सिस्टम क्रप्ट ?
तपाईको घरमा या अफिसमा ब्याकप छैन लाईन गएको गइ गर्छ, त्यस पछि कम्प्युटरलाई सटडाउन नगरि तपाईको कम्युटर बन्द हुन्छ, त्यती बेला तपाईको कम्प्युटर सिस्टम बिपरित काम भईरहेका हुन्छ हामीले अपरेटिङ सिस्टम कम्प्युटरमा क्राक भर्सनमा मात्र इन्सटल गरेका हुन्छौ मलाई लाग्छ तपाई हामी अधिकांसले जेन्युन अपरेटिङ सिस्टम लिएका छैनौ यदि लिनु भएको छ भने चाहि फेरी यो समस्या आउदैन । त्यसरि तपाईको कम्प्युटर आफै बन्द भएको समयमा तपाईको अपरेटिङ सिस्टमको ओपन हुने फाईलले काम नगर्न सक्छ त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईको कम्प्युटर ढिलो खुल्ने समस्या आउछ। यदि तेस्तो समस्या हो भने फेरि तपाईको कम्प्युटरमा तपाईले अपरिटिङ सिस्टम इन्सटल गर्न जरुरी पर्दछ।
तपाईको हार्डडिक्स चेक गर्नुहोस्
कम्प्युटर स्लो हुने अर्को कारण तपाईको हार्ड डिक्समा समस्या आएर हुन सक्छ । यदि तपाईको हार्डडिक्स धेरै पुरानो अथवा हार्डवेयरको समस्या आएमा पनि तपाईको कम्प्युटर स्लो भएर चल्छ। त्यसका लागी तपाईले अर्को हार्डडिक्स साट्नु नै उपयुक्त हुन्छ। हार्डडिक्स साट्दा कस्तो किसिमको साट्ने त भन्ने विषयमा म चाहि तपाईलाई एस.एस.डि हार्ड डिक्स लगाउनु हुन सुझाब दिन्छु। किनभने तपाईले चलाइरहेको हार्डडिक्स एच.डि.डि हार्डडिक्स हो । यो एच.डि.डि हार्डडिक्सको तुलनामा एस.डि.डि हार्डडिक्स २ गुणा छिटो हुन्छ। त्यसैले तपाईको अपरेटिङ सिस्टम खोल्ने साथै तपाईको प्रोगाम छिटो खोल्नमा यसले मद्दत गर्दछ ।